ch 2 John – 2fish
ekhaya / Bible / YeVangeli kaYohane / ch 2 John
2:1 Kwathi ngomhla wesithathu, kumtshato yabanjwa eKana yelaseGalili, waye unina kaYesu ekhona.
2:2 Ke uYesu nabo babemenyiwe nabo kuloo mtshato, nabafundi bakhe.
2:3 Kwaye xa lisweleke iwayini, unina kaYesu wathi kuye, "Baphelelwe yiwayini."
2:4 Wathi kuye uYesu: "Yintoni na loo enam nawe, umfazi? Ixesha lam alikafiki ufikile. "
2:5 unina wathi kwizicaka, "Kwenzeni konke anixelelayo."
2:6 Ke kaloku, kuloo ndawo, kwakukho imiphanda yelitye emithandathu, ngokuba zokuhlanjululwa idini amaYuda, equlethe imilinganiselo emibini okanye emithathu ngalinye.
2:7 UYesu wathi kubo, "Zalisani iingqayi zamanzi." Kwaye bazizalisa ukusa kanye phezulu.
2:8 Wathi kubo uYesu, "Ngoku ofikelela kuso, niyise ukuba igosa eliyintloko wetheko. "Kwaye bayithabatha kuye.
2:9 ke, xa igosa eliyintloko abadla amanzi enza iwayini, ekubeni wayengazi lapho evela, ngokuba kuphela abalungiseleli ababewakhile amanzi babesazi, igosa eliyintloko yambiza umyeni,
2:10 wathi yena kuye: "Wonke umntu onikela iwayini elungileyo kuqala, ke ngoku, xa bathe baba benxilile, Yena unika izinto sibi. Kodwa wena uyibandezile iwayini emnandi, kwada kwangoku. "
2:11 Oku kuqaleka kwemiqondiso uYesu kwafezwa eKana yelaseGalili, ebonakalisa ubungangamsha bakhe, baza abafundi bakhe bakholwa kuye.
2:12 emva kwale, he descended to Capernaum, with his mother and his brothers and his disciples, but they did not remain there for many days.
2:13 Kwaye ke ipasika * yamaYuda yayikufuphi, yaye ngoko uYesu wenyuka waya eYerusalem,.
2:14 Wafumana, ehleli etempileni, nabathengisi iinkomo nezimvu namahobe, kanye yabatshintshi.
2:15 Ke kaloku wayenze into efana iziniya ngaphandle iintambo ezincinane, wabakhupha bonke etempileni, kuquka impahla emfutshane neenkomo. Kwaye waziphalaza iingqekembe Ubhedu yabatshintshi, kwaye wazibhukuqa iitafile zabo.
2:16 Kwaye abo kwabathengisa amahobe, uthe: "Zikhupheni apha ezi zinto apha, kwaye musa Indlu kaBawo sanukuyenza indawo indlu yokuthengisela. "
2:17 inene, abafundi bakhe bakhumbula ukuba kubhaliwe kwathiwa: "Ukuzondelela indlu yakho kudla nam."
2:18 Ngoko amaYuda baphendula, bathi kuye, "Usibonisa mqondiso mni na wokusibonisa ukuba, ukuba wenze ezi zinto?"
2:19 UYesu waphendula wathi kubo, "Yidilizeni le ndlu, ndize ngeentsuku ezintathu ndiya kuyivusa. "
2:20 Ngoko ke amaYuda athi, "Le tempile yakhiwe iminyaka emashumi mane anesithandathu phezu, kwaye ndiya kuyivusa ngeentsuku ezintathu?"
2:21 Kodwa ke wayethetha ngetempile yomzimba wakhe.
2:22 ngoko ke, Akuba ke wavuswa kwabafileyo, abafundi bakhe akhunjuzwa ukuba ebekuthethile oku, baza bakholwa iZibhalo kunye ilizwi awalithethayo uYesu.
2:23 Ke kaloku ngoxa yena eYerusalem ngexesha lePasika, ngomhla wetheko, abaninzi Sikholosile nje ngegama lakhe, bebona imiqondiso yakhe ukuba akanakwenza.
2:24 Ke yena uYesu akaziyekelanga kubo, ngenxa yokuba yena ngokwakhe babeyazi bonke abantu,
2:25 kwaye nangenxa yokuba ingabanga mfuneko yokuba nabani na ukuba anikele ubungqina ngendoda. Kuba yena ezazi phakathi umntu.